PressReader - Ilanga: 2018-10-25 - Abazimisele ukuvota kolokuchibiyela
Abazimisele ukuvota kolokuchibiyela
Bathi bakhathele ukukhohliswa ngamaphasela okudla
Ilanga - 2018-10-25 - Izindaba - PHUMLANI GAMA
BAVEZE intukuthelo yabo ngokukhohliswa ngamaqembu ezepolitiki abanye babantu baKwaNongoma abavivela ukhetho lokuchibiyela ku- ward 20, oluzokuba mhla ka-7 kuLwezi (November) emuva kokuba obeyikhansela egwetshwe iminyaka ewu-10 ebhadla ejele ngecala lokutholakala nezinkomo zokwebiwa.
UZamani Sibiya ugwetshwe kade ephethe le ward ngethikithi le-IFP eqophe umlando ngokhetho lohulumeni basekhaya iqoqa wonke ama- ward awu-21 kuMasipala waKwaNongoma.
Abantu abakhulume neLANGA ngoLwesibili, baveze ukuthi bazogcina ngokubhalisa maqede bangavoti ngoba sebekhathele wukuvotela ubala.
Babodwa abathi bafuna ukujezisa i-IFP maqede balandelise ngeANC ngoba kudala la maqembu esemandleni kodwa umehluko empilweni yabo kawubonwa.
Bathi sebeyawazi umkhuba wabaholi bala maqembu abafika ngezikhathi zokhetho namaphasela okudla kuncengwa amavoti, kodwa emuva kwalokho bahambe ijuba likaNowa.
Batshele leli phephandaba ukuthi bazothatha ukudla kuphela maqede bangalubhadi ezikhungweni eziwu-6 okuzokuvotwa kuzona ngosuku lokhetho.
Yize le ndawo ingaqhelile kangako edolobheni laKwaNongoma, kodwa namanje isenenkinga yokungabi nayo ingqalasizinda esezingeni elihloniphekile. Imihlangano yomphakathi yenzelwa ngaphansi kwezihlahla ngenxa yokuthi ihholo kalibonwa, akukho nowodwa umtholampilo kule ward.
Amalungu omphakathi athi phakathi kwezinto eziyinkinga kule ndawo wukugqoza kwamathuba emisebenzi, amanye awo okuyaye kuthi uma evela, akhethe abathile.
UMnu Abiot Vilane, oyilungu lomphakathi elisesigungwini sobuholi bomdabu kule ndawo, uveze ukuthi uthwala kanzima uma kufanele ahlanganise umphakathi esimeni sezulu esinamakhaza noma izulu lina, kwazise imihlangano iba ngaphansi kwezihlahla.
“Abanye bosopolitiki siyababona bengena belandelana bazocela amavoti, kangazi noma sebekukhohliwe yini okubi abakwenza kulo mphakathi. Sithwala kanzima uma kufanele sihlanganise umphakathi ngoba akunamahholo lapha endaweni.
“Kasigaguli qembu, kodwa sesikhathele yilawa amakhulu. Uma sithanda sizovotela abangene ngokuzimela ngoba sikholwa wukuthi kabanawo lo moya wenkohlakalo.
“Lapha kasinazo izinkundla zezemidlalo ebalulekile njengombhoxo ne- tennis. Behlulwa ngisho nawukwakha inkundla kanobhutshuzwayo, nalo mkhuba wamaphasela okudla sesiyawazi,” kusho uMnu Vilane.
UNkz Nokuphila Mathe (36), naye oyilungu lomphakathi, uthe namanje basathwele kanzima beyintsha yesifazane.
“Mina nje nabangani bami, si- nqume ukuthi ngeke sivote ngoba sidinwa wukuthi uhulumeni kawuyingeni indaba yethu. Ngithwele kanzima. ngiduve ekhaya nesitifiketi sikamatikuletsheni.
“Kangisayiphathi-ke indaba yalaba abavele besemandleni okubusa ngoba namanje kuze kuba siyavota nje, yingoba kungenelele uhulumeni wesifundazwe nawo esivele singeke siwuvotele ngoba wachitha imali enkulu lapha kuthiwa kwakhiwa iphrojekthi kodwa yangaqedwa. Kuningi esikudingayo kodwa kungenzeki ekubeni kudala saqala ukuvota,” kusho uNkz Mathe.
Emaqenjini angenele lolu khetho kubalwa i-IFP, iDA, iNFP, i-ANC, i-EFF noNkk Bonisiwe Zulu olungenele ngokuzimela.
UNKK Bonisiwe Zulu ongenele ukhetho lokuchibiyela ku-ward 20 KwaNongoma ngokuzimela. Uthathwe esigcawini okuhlala kusona imihlangano yomphakathi njengoba kuthiwa ihholo kalikho kule ndawo.